Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Okuthunyelwe izivakashi » Ingabe Umphathi Wendawo Yakho Kufanele Agunyazwe?
Umphathi wendawo unomthwalo wemfanelo wokwengamela imisebenzi yansuku zonke yesakhiwo noma indawo yehhovisi. Baqinisekisa ukuthi yonke into ihamba kahle nokuthi abasebenzi baphephile futhi bakhiqiza.
Uma ubheke ukuqasha umphathi wesikhungo esisha, kuningi okufanele ukucabangele. Kusukela ezidingweni zamaholo, isitifiketi sokuphathwa kwesikhungo emisebenzini, nansi imibuzo emihlanu okufanele uzibuze yona ngaphambi kokuqasha umuntu.
Abaphathi bezindawo bavame ukwengamela izakhiwo eziningi noma amahhovisi ngesikhathi esisodwa, okwenza imisebenzi yabo ibe nzima nakakhulu. Nansi imibuzo emihlanu okufanele uzibuze yona uma ufuna ukuthola umphathi wesikhungo ophelele.
1. Yiziphi Izitifiketi Zabo?
Abaphathi bezikhungo abaqinisekisiwe baphumelele ukuhlolwa okulawulwa yi-Facilities Management Association of America. I-FMAA inikezela ngamazinga amabili esitifiketi: Umphathi Wendawo Oyingcweti Oqinisekisiwe kanye noMphathi Wendawo Oyingcweti Oqinisekisiwe.
Ukuqokwa kwe-CPFM kudinga abafundi ukuba baphumelele izifundo eziyisisekelo ze-CMFA Zokuphathwa Kwendawo kanye nochungechunge lwezivivinyo ezihlokweni ezinjengokuphathwa kwezokuphepha, ukuhlelwa kwesabelomali, izinsiza zabasebenzi, ukuphathwa kwezakhiwo, nezinye izici ezihlobene nokuphathwa kwesikhungo. Abazongenela ukhetho kumele futhi baqedele amahora angu-300 okuthuthukiswa kochwepheshe ukuze bathole lesi sitifiketi.
Ukuze uthole ukuqokwa kwe-CPMM, amakhandidethi adinga ukuphasa izivivinyo ezifanayo nalezo ezidingekayo ku-CPFM. Noma kunjalo, badinga futhi ukukhombisa ubungcweti emikhakheni eyengeziwe njengokuphathwa kwephrojekthi, ukuphathwa kobungozi, nokusimama. Abafundi abaphothula lezi zifundo nezivivinyo bangalindela ukwenza cishe u-$50k ngonyaka.
2. Bangakanani Isipiliyoni Abanaso?
Umuntu ofanelekayo uzoba neminyaka eminingana yesipiliyoni sokuphatha isakhiwo esikhulu noma izakhiwo zamahhovisi. Lokhu kusho ukuthi bazokwazi ukubeka phambili imisebenzi nokuphatha abantu. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi abanye abaphathi bezikhungo baqala benesipiliyoni esingaphansi kweminyaka emithathu. Kodwa-ke, akuvamile ukuthi bathole ulwazi olubalulekile ngesikhathi sokuqeqeshwa noma izikhundla zesikhashana.
3. Ingabe Umuntu Ozokhethwa Usebenza Kahle Nabanye?
Kujwayelekile ukuthi abaphathi bezikhungo basebenze eduze nonjiniyela, abadwebi bezakhiwo, osonkontileka,
nabanye ochwepheshe. Uma ufuna umuntu ongasebenzisana ngempumelelo nabanye, bheka ikhandidethi elisebenze namaqembu ahlukene ngaphakathi kwenkampani. Umphathi wesikhungo omuhle uzoqonda ukuthi iqembu ngalinye lidingani nokuthi kungani izinqumo ezithile zenziwe.
4. Ingabe Bangakwazi Ukusingatha Izimo Ezicindezelayo?
Abanye abaphathi bezikhungo bangase babizwe ukuthi babhekane nokunqamuka kukagesi, izinhlekelele zemvelo, noma izimo eziphuthumayo zezisebenzi. Lezi zimo zidinga ukucabanga okusheshayo nesinyathelo esiwujuqu. Bheka umuntu ozongenela ukhetho obonisa amakhono aqinile obuholi lapho ebhekana nezimo ezicindezelayo.
5. Ingabe Kukhona Okunye Engifanele Ngiyazi Ngabo?
Bheka ikhandidethi elinerekhodi eliqinisekisiwe lempumelelo. Cela izinkomba kubaqashi bangaphambilini futhi uhlole ukubuyekezwa okuku-inthanethi. Ungase futhi ufune ukuxoxisana nabambalwa ngaphambi kokukhetha eyodwa.
Izinhlobo zesitifiketi somphathi wesikhungo
Kunezinhlobo ezimbili zezitifiketi zokuphathwa kwesikhungo ezitholakalayo. I-Facilities Management Association inikeza eyodwa. I-International Facility Managers Association ihlinzeka ngokunye. Zombili izinhlangano zinikeza izinhlelo ezifanayo, ngakho-ke noma yiluphi uhlelo olukhethayo, ungaqiniseka ukuthi ukhethe indlela efanele.
Nawu umehluko phakathi kwalezi zinhlelo ezimbili:
• I-CPFM – Uhlelo olugunyazwe yi-FMAA lwenzelwe abantu ngabanye asebevele beneziqu ze-bachelor kwezamabhizinisi noma komunye umkhakha. I-FMAA inikeza i-Associate of Science in Facility Management degree kanye nesitifiketi sayo. Ukuze bafanelekele ukuthola iziqu ze-ASFM, abafundi kufanele bathathe okungenani amahora esikweletu ayi-12 ekolishi eligunyaziwe noma enyuvesi. Abafundi babe sebeqeda yonke imfundo yabo ngohlelo lokuqeqeshwa lwe-FMAA.
• I-CPMM – Uhlelo olugunyazwe yi-IFMA lugxile kakhulu kumakhono asebenzayo. Abantu abaphothula izifundo ze-IFMA's Certified Professional in Building Operations bathola izitifiketi emikhakheni emine ebalulekile: ukuhlela indawo, ukusebenza kwezakhiwo; ukunakekela; kanye nokusebenza kahle kwamandla. Ngaphezu kwalokho, bafunda ngobuchwepheshe bakamuva obusetshenziswa embonini.
Zombili lezi zinhlelo zihlanganisa imfundo yasekilasini, ukuzilolonga ngezandla, nezivivinyo ezibhaliwe. Ngemuva kokuphothula uhlelo, abazongenela ukhetho bangafaka izicelo zokuhlalela ukuhlolwa kwesitifiketi.
Izibopho Zomphathi Wesikhungo
Umphathi wendawo wengamela zonke izici zesakhiwo noma izakhiwo zamahhovisi. Umsebenzi wabo uhlanganisa ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihamba kahle, okuhlanganisa nokugcina amazinga aphezulu okuphepha nokuvikeleka. Nansi imisebenzi embalwa yomphathi wesikhungo:
1. Igcina Amazinga Okuphepha
Abaphathi bezindawo baqinisekisa ukuthi zonke izingxenye zesakhiwo zihlangabezana neziqondiso eziqinile zezempilo nezokuphepha. Ngokwesibonelo, bayaqiniseka ukuthi awekho amakhemikhali ayingozi eduze nemithombo yamanzi noma izindawo okulungiselelwa kuzo ukudla. Baphinde baqaphe izinga lomoya futhi bagcine isistimu yokushisisa ihlanzekile.
2. Igcina Izisebenzi Ziphephile
Abaphathi bezikhungo kumele bavikele abasebenzi ekulimaleni. Lokhu kusho ukuqinisekisa ukuthi izindawo zokusebenza ziyahlangabezana nezidingo ze-ergonomic, ukuhlinzeka ngokukhanyisa okufanele, nokufaka izicishamlilo. Kufanele futhi banikeze izindawo zokuphuma eziphuthumayo kanye nezinsiza zosizo lokuqala.
3. Iqinisekisa Ukusebenza Kwamandla
Abaphathi besikhungo baqondisa ukusetshenziswa kwamandla kwesakhiwo. Kufanele bahlole njalo futhi baqinisekise ukuthi amasistimu e-HVAC asebenza kahle. Kufanele futhi bafake amadivaysi okonga amandla njengamalambu okukhanya nama-thermostat.
4. Uqapha Isondlo
Abaphathi besikhungo kudingeka bahlole okokusebenza njalo ukuze baqinisekise ukuthi kusebenza kahle. Kufanele futhi bagcine amarekhodi abhala noma yiziphi izinkinga abahlangabezane nazo ngesikhathi kulungiswa.
5. Yengamela Ukuvikeleka Ekwakhiweni
Abaphathi bezindawo kufanele baqinisekise ukuthi izakhiwo zivikelekile. Kufanele baqaphe izindawo zokungena futhi baqinisekise ukuthi iminyango ikhiyiwe uma ingasetshenziswa. Kufanele futhi baqeqeshe abasebenzi ukuthi babone izinto ezisolisayo futhi babike noma yikuphi ukukhathazeka ngokushesha.
Umsebenzi wokuphatha isikhungo unemisebenzi eminingi ehlukene etholakalayo. Nakuba ezinye izikhungo abaphathi bangase ngokukhethekile endaweni eyodwa ezifana uhlu lwamathuluzi okugcinwa kwezimboni, abanye bangakhetha ukugxila emikhakheni eminingi. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha yiphi indlela, umphathi wesikhungo uzodlala indima ebalulekile ekugcineni abantu bephephile futhi benempilo.
Energy Ukuphathwa Isayensi
Izeluleko Eziwusizo Zokubhala Incwadi Yokugqugquzela
I-Canada Jetlines ithola imvume yokuqala indiza yayo...